Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 15)
Yintoni entsha kwiiMaphu zikaGoogle: izilumkiso zesiganeko, indawo yexesha lokwenyani ngebhasi / uloliwe kunye neendlela zohambo ezixubileyo
Kule veki izinto ezine zifikile kwiimephu zikaGoogle: ulawulo lomculo, izehlo zendlela, uloliwe wexesha langempela kunye nendawo yebhasi kunye nohambo oluxubekileyo.
Njengonyaka wonke, inani uGoogle abiza iApple ukuba libe yinjinjini yokukhangela emiselweyo inyuke kakhulu.
Phantse i-akhawunti ye-Facebook yezigidi ezingama-50 zibeka emngciphekweni ngenxa yokophula umthetho
Ukophulwa kokhuseleko ku-Facebook kubeka phantse i-akhawunti yomsebenzisi ezizigidi ezingama-50 emngciphekweni, ixele inkampani.
Uyisebenzisa kanjani uMguquleli oKhawulezileyo weMicrosoft kwi-SwiftKey- ulongezo lwamva nje kwi-keyboard
I-SwiftKey ivumela ukusuka kwinguqulelo entsha ukusebenzisa umguquleli weMicrosoft ukwenza uguqulo ngaxeshanye kulo naluphi na ulwimi.
Umfanekiso wokuqala wento eza kuba sisizukulwana sesibini seRazer Ifowuni sele ivuziwe, uyilo olufana kakhulu noluandulelayo.
Imakethi yaseTshayina ilungiselela ukufumana ingxelo ekhethekileyo ye-Oppo Fumana i-X, uguqulelo oluza kufika nge-10 GB ye-RAM
Uyikhetha njani indawo kwiqela elikwiMaphu zikaGoogle ukucwangcisa umsitho
Ngoku ungacwangcisa kwiqela apho uza kuya kwisidlo sangokuhlwa okanye isidlo sasemini ngenkwenkwezi entsha yeGoogle Maps. Kulula njengokwabelana ngekhonkco.
Ukucoca imifanekiso yamaphephadonga kunye nembonakalo yekhamera yePixel 3 XL. Fumana ngakumbi malunga nokuvuza okutsha kweGoogle.
Kwi-nostalgic, i-SEGA's Streets yeRage 2 ifika ukuzalisekisa ngokupheleleyo uxanduva lwethu kwaye isibuyisela kweminye iminyaka.
I-WhatsApp inokuvalwa ngokupheleleyo e-India. Fumanisa ngakumbi malunga neengxaki zesicelo kwilizwe laseAsia elinokuthi lithintele ukusetyenziswa kwalo.
I-WhatsApp yongeza iifoto ezikwi-Intanethi kwizaziso zemveli zePie ye-Android
Iya kuvela kwipaneli yesaziso apho umfanekiso othunyelwe lulo naluphi na unxibelelwano onalo kuWhatsApp luya kwanda kwaye luwe.
I-Android ihlawula i-3 yezigidi zeedola ukufumanisa iimpazamo kwezokhuseleko. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo yemivuzo yenkampani.
Ngoku unokufumana iqabane okanye abahlobo abatsha kuFacebook njengeTinder
Ukuthandana kuFacebook ngumsebenzi omtsha wenethiwekhi yokuhlangana nabantu abatsha kwisixeko sakho kwaye ke unxibelelane nabo njengeTinder.
Inkonzo yomculo yokusasaza iApple, iApple Music, sele ihlaziywa nje ukuxhasa iAuto Auto.
Renault, Nissan kunye Mitsubishi bamkele i-Android kwiimoto zabo kwaye badibanise iiGoogle zokusebenza
Ngonyaka ka-2021, kuza kuqaliswa imoto yokuqala yakwa-Renault ezakuquka i-Android evela kumzi-mveliso. Iimephu zikaGoogle, uMncedisi kunye nezinye izinto ezininzi ezizenzekelayo.
Awukayiva ngoEelo okwangoku?
Inkqubo yokusebenza kuka-Eelo, inkqubo kaGaël Duvan, ibonisa ukuba inkqubo yokusebenza esekwe kwi-Android inokwenzeka ngaphandle kobukho bukaGoogle
I-Google Home Hub, isithethi esihlakaniphile esine-intshi ye-7 intshi, iya kukhutshwa ngokusemthethweni ngo-Okthobha 9
Ingxilimbela yokukhangela, uGoogle, sele elungiselele isithethi sayo sokuqala esinobuqili kunye nescreen esidibeneyo se-7-intshi, isixhobo esiza kukhutshwa ngo-Okthobha 9
Fumana i-200 Mb Fibre Rate kwiPepephone ngexabiso elifanelekileyo
I-200 Mb Fibre Rate yePepephone iyafumaneka ngexabiso elifanelekileyo. Fumana ngakumbi malunga neli nqanaba ngoku eligubungela iMovistar.
Sivavanya ikhowudi yeCSS eyaphula zonke ii-iPhones kunye nee-iPads kwaye oku kuyenzeka
I-WhatsApp sele isebenza ekwazisweni kwemowudi emnyama
I-WhatsApp iya kwazisa imowudi emnyama kungekudala. Fumana ngakumbi malunga nokufika kwendlela emnyama kwinkqubo yemiyalezo eyaziwayo.
IPUBG Iselfowuni iyaphula kunye nezigidi ezingama-20 zabadlali abasebenza rhoqo ngenyanga kumdlalo weselfowuni okwangoku.
Ividiyo yeHuawei, kunye nesixhobo seHuawei
Ividiyo yeHuawei, inkonzo yemixholo yemultimedia yokusasaza ngobhaliso lwasimahla lwabasebenzisi bezixhobo zeHuawei, ifika eSpain
I-HTC isebenza kwiflegi yayo elandelayo: iya kuba yi-5G kwaye iya kuthwala i-Snapdragon 855
Amarhe akutshanje abonisa ukuba i-HTC, inkampani yaseTaiwan, isebenza kwifowuni ye-5G. Funda nzulu malunga nolu lwazi.
Iifoto kunye ne-SMS sele zilungelelanisiwe ne-Android evela Windows 10 Inkqubo 'yokuHlola ngaphakathi'
IMicrosoft Inkqubo yakho yeApple eza kuguqulelo olukhulu Windows 10 hlaziya.Ngqamanisa iifoto kunye neSMS.
Ipie ye-Android 9.0 ngoku iyahambelana ne-Sony DualShock 4 kunye ne-Xbox Onepad
Ipie ye-Android 9.0 ngoku iyahambelana ne-DualShock 4 kunye ne-Xbox Onepad yomdlalo.Fumana okuninzi malunga neli nyathelo libalulekileyo lenkqubo yokusebenza.
IMediaTek iya kuzisa i-5G kwisiphelo esisezantsi
IMediaTek isebenza ngokuzisa i-5G kwisiphelo esisezantsi. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokutyhala obu buchwephesha kwi-Android.
Ezi ziintshaba ezintlanu zeWifi ekufuneka uziphephe ukonwabela unxibelelwano oluhle
Sikhankanya "izithintelo" ezininzi ekufuneka uziphephe kuzo zonke iindleko ukonwabela uqhagamshelo oluhle lweWi-Fi ngaphandle kophazamiseko lwalo naluphi na uhlobo.
I-AnTuTu ityhila ukuhanjiswa kweefowuni emhlabeni ngokweempawu zazo
I-AnTuTu ityhile nje idatha ezininzi ezisixelela indlela ii-smartphones ezisasazwa ngayo kwihlabathi ngokweempawu zazo.
Unikezelo olutsha lweNokia 9 ityhila isikrini ngenotshi
INokia 9 ivele kunikezelo olubonisa umphambili kunye nomva kwesixhobo, ngolungiselelo olothusayo lweekhamera ezintlanu.
UGoogle uzokwazisa ngeGoogle Pixel 3 nge-9 ka-Okthobha eNew York. Fumana ngakumbi malunga nomsitho omtsha wokubonisa ngomnxeba.
Urhulumente wase China ufuna ukunqanda iziyobisi kumdlalo wevidiyo
Urhulumente wase-China uphumeza amanyathelo okuphelisa isidingo esibi sabathengi semidlalo yevidiyo. Funda nzulu malunga nesi sicwangciso.
I-Honor Band 4, isikrini se-AMOLED kunye nokujonga esweni kwentliziyo ngokuqhubekayo
Sikuxelela zonke iinkcukacha ze-Honor Band 4, ibhanti ekrelekrele ejonga ukubetha kwentliziyo yakho ukuya kuthi ga kwiintsuku ezi-6 ngaphandle kokuphazamiseka.
Iifowuni ezirhabaxa ziyenza ukuba icetyiswe ngeshishini le-Android
Inkqubo yokuCetyiswa kweShishini ku-Android yazisa ngeeselfowuni ezirhabaxa. Fumana ngakumbi malunga neefowuni eziza kwinkqubo yeshishini.
URazer uqinisekisa ukuba iyasebenza kwisizukulwana sesibini seRazer Ifowuni
Kwiiveki ezidlulileyo, saphinda savuma ukuba inkampani iRazer, ingabonisa isizukulwane sesibini seRazer Ifowuni ngaphambi kokuba kuveliswe izixhobo zemidlalo, iqinisekisile ukuba iyasebenza kwisizukulwana sesibini seFowuni yeRazer.
I-WhatsApp beta inika iingxaki kumanqaku elizwi kuhlobo 2.18.271
Inguqulelo ye-WhatsApp beta 2.18.271 ayikuvumeli ukuba kudlale iimemo zezwi. Bavala iapps xa bezama ukubazala kwakhona bothusa uninzi.
IG Shopping iya kuba yinto ekhethekileyo ye-Instagram enikezelwe ekuthengeni. Ngoku ungathenga kwiivenkile zakho ozithandayo.
Inkonzo yeNkulumbuso yeAmazon iya kunyuka ngama-80%
IAmazon inyusa ixabiso lokubhaliswa kwayo kweNkulumbuso ngama-80% ukuya kwi- € 36 ngonyaka, iseyinkonzo enomdla ngexabiso elifanelekileyo?
I-Honor 7S iza kuphehlelela ngomso e-India ngexabiso eliphantsi
I-Honor 7S iza kuphehlelelwa ngomso e-India ngexabiso eliphantsi. Funda ngakumbi malunga nesi sixhobo sisebenza kancinci.
UPhononongo lwePOPTEL P9000 MAX
Sivavanye i-POPTEL P9000 MAX emxinwa, i-smartphone ene-IP68 certification, ibhetri ye-9000 mAh kunye nokusebenza okubaluleke kakhulu ekuqwalaseleni.
Ixabiso eliphantsi likaGoogle Pixel liya kumiliselwa eIndiya
UGoogle uzokwazisa iPixel ngexabiso eliphantsi kwiimarike ezinjengeIndiya. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale Pixel enexabiso eliphantsi eya kuthi ifike ngo-Okthobha.
Ukuba inethiwekhi ye-4G ikwazi kancinci, ukuba uthenga iXiaomi Mi MIX 3 xa ikwiimarike, ungathatha ithuba lesantya se5G.
Umntu washiya i-Pixel 3 Xl elityelweyo emotweni
Umntu ulibala iGoogle Pixel 3 XL yakhe emotweni. Fumana ngakumbi malunga neli bali esazi ngalo uyilo lwefowuni.
Emva kweentsuku ezininzi zamarhe kunye nokuqagela, inkampani esekwe eCupertino isandula ukuthumela isimemo kumajelo eendaba apho izakuba nge-12 kaSeptemba, u-Apple uza kuzisa isizukulwana esitsha se-iPhone kunye nohlaziyo ekudala lulindelwe loyilo I-Apple Bukela.
Kuncinci okunokuthiwa malunga nesiqalisi sePOCO, isixhobo sokuqalisa i-Pocophone F1 esungulwe namhlanje e-India. Yama kukhetho.
Inkampani yaseKorea ayikaze yaziwe ngokuba ngomnye wabavelisi bokuqala ukuvuselela isiphelo sayo ngokukhawuleza kwiinguqulelo ezintsha. Kubonakala ngathi inkampani yaseKorea iSamsung ifuna ukuhlaziya izixhobo zayo kwiPie ye-Android ngokukhawuleza, okanye ubuncinci Galaxy S9.
Kukhutshwa iSmartisan Nut Pro 2S: isikrini esingu-6.01-intshi, iSnapdragon 710 nangaphezulu
I-Smartisan Nut Pro 2S isemthethweni e-China. Funda konke malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi kunye neprosesa yeQualcomm's Snapdragon 710.
U-Oppo ubaleke kuvavanyo lwe-5G kwifowuni ye-Oppo R15 eguqulweyo ngemodem yeQualcomm X50. Sandisa iindaba kuwe!
I-Realme 2 isandula ukwaziswa e-India nge-Snapdragon 450 SoC.Funda konke malunga nesi sixhobo sinexabiso eliphantsi esivela kwinkampani.
I-TSMC ukuqala ukuveliswa kweQualcomm's Snapdragon 855 kwikota elandelayo
I-Arhente yeendaba esembindini yaseTaiwan iqinisekisile ukuba umntu oza kungena ezihlangwini ze-SD845, iSnapdragon 855, uza kuqala kwimveliso kwikota elandelayo nakwikota yokugqibela.
I-Google Pixel 3 iya kuboniswa ngo-Okthobha u-9
I-Google Pixel 3 iya kuziswa ngo-Okthobha 9. Fumana ngakumbi malunga nomhla wokukhutshwa kweefowuni zikaGoogle ezintsha.
Uhlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-Facebook ngoku luxhasa amajelo ezaziso e-Android
Ukusuka kuhlobo lwe-Android 8.0 Oreo ngoku ungasebenzisa amajelo esaziso kwi-Facebook app. Ukufika okupheleleyo kwenethiwekhi yoluntu.
Iindudumo ngumdlalo wenja ".io" oneenqwelomoya kunye neenqwelomoya
Iindudumo ngumdlalo okhuphisanayo kwi-Intanethi apho kuya kufuneka ujongane nabanye abadlali abavavanya iindiza zabo zokulwa.
I-veto zase-Australia i-Huawei kunye ne-ZTE ukusuka kuphuhliso lwenethiwekhi ye-5G kweli lizwe
Urhulumente wase-Australia uyakwalela uHuawei kunye ne-ZTE ukuba bangenelele kuphuhliso lwelizwe le-5G. Yazi zonke iinkcukacha malunga nesi sithintelo.
UShaq Fu: Ilivo elizalwe ngokutsha likubeka inkwenkwezi ye-NBA la "Double Dragon"
UShaq Fu: Ukuzalwa kwakhona kweNtsomi kukubeka phambi komdlalo wobugcisa bemfazwe ukuze ukukhumbuze ngelifa elashiywa nguDrako Dragon.
I-Realme 2 iya kuziswa ngo-Agasti 28
I-Realme 2 izakufika eIndiya ngexabiso eliphantsi nge-28 ka-Agasti. Fumanisa yonke into malunga nokukhutshwa okuzayo!
Ukuboniswa kwe-Honor 8X kunye ne-8X Max kuqinisekisiwe nge-5 ezayo kaSeptemba
I-Honor isandula ukuveza umhla we-Honor 8X kunye ne-8X Max. Iya kuba nge-5 kaSeptemba. Sandisa iindaba kuwe!
Ukuveliswa kweSpapdragon 855 kuya kuqala kwikota yesine yonyaka
I-Snapdragon 855 iya kuqala kwimveliso kwikota yokugqibela ye-2018. Fumanisa ngakumbi malunga nemveliso yenkqubo yeQualcomm
Isibhengezo sikaHuawei samva nje siqinisekisa ukuba i-Kirin 980 iya kutyhilwa nge-31 ka-Agasti
IHuawei izakuveza iHiSilicon Kirin 980 e-IFA eBerlin, eJamani, nge-31 ka-Agasti. Fumanisa ukuba ifemu isigcinele ntoni!
I-HTC isandula ukubhengeza ukumiliselwa kwale Agasti 30 izayo. Isenokuba bubomi beHTC U12. Sandisa iindaba kuwe!
UGoogle Fit uhlaziywe ngokupheleleyo ukukhuthaza ukuba uphucule ithoni yomzimba kunye nempilo yakho
Uhlaziyo olutsha lweGoogle Fit lufuna ukuba ususe iesile lakho esofeni kwaye uqale ukuhamba ubuncinci yonke imihla. Konke ukuphucula impilo yakho.
Okulandelayo kwi-Instagram: iimemo zelizwi kwimiyalezo ethe ngqo
Ukuba ungumlandeli wale ntanethi, sele uyazi ukuba uhlaziyo luza kuza kungekudala oluza kukuvumela ukuba usebenzise amanqaku elizwi kwimiyalezo ethe ngqo evela kwi-Instagram.
I-360 N7 Pro kunye neLite zisemthethweni: amanqaku kunye namaxabiso esi sibini sitsha
I-360 ikhuphe i-N7 Pro kunye neLite. Funda malunga neempawu kunye nokuchazwa kobuchwephesha kwezi zixhobo ezintsha zorhwebo.
I-Pepephone ikunika ii-megabytes eziphindwe kabini kwi-fiber optics ye-29 euro. Fumanisa okungakumbi malunga notshintsho umqhubi oza kulwazisa kwifayibha yayo ebonakalayo,
Zilungiselele ukufumana zonke ezo zifuba uzifumeneyo ngoLwesithathu ngokuqala kwexesha elitsha kwiPUBG Mobile.
IVivo ukumilisela iVivo V11 nge-6 kaSeptemba e-India
IVivo ilungiselela ukumilisela iVivo V11, isiphelo sendlela ephezulu, eIndiya ngoSeptemba 6. Fumanisa!
Ukuthengiswa kwekhaya likaGoogle kukhula ngama-449% kwikota yesibini yonyaka
Intengiso yasekhaya kaGoogle iyakhula kwaye ibethe iAmazon kwintengiso. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa kwezithethi zikaGoogle.
IMediaTek sele isebenza kwiHelio P80 kunye neP90
IMediaTek isebenza kwiiprosesa ezimbini ukuphumelela i-Helio P60. Fumanisa ngakumbi malunga neeprosesa ezintsha zohlobo lwesiTshayina.
UGoogle wazisa ngenkxaso yezixhobo zokuncedisa ukuva ezihambelana ne-Android. Fumanisa ngakumbi ngale nkqubo intsha iphuhliswe yinkampani.
UGoogle ulungiselela ukuvula ivenkile yakhe yokuqala ezimeleyo
UGoogle angavula ivenkile yakhe yokuqala ezimeleyo ukuze athengise zonke iimveliso zayo, nazi iinkcukacha zolu daba
I-Oppo R17 Pro iya kuba neekhamera ezintathu zetekhnoloji ye-TOF
Umfanekiso omtsha uqinisekisa inqaku le-Oppo R17 Pro, iikhamera ezintathu zangasemva ezinetekhnoloji ye-ToF ehambele phambili
I-AGM ithumela izimemo zokuphehlelelwa kwe-AGM X3 enomxholo oyingozi
I-AGM, umvelisi wase-China wee-mobiles ezi-rugged, uhambisa izimemo zokuphehlelelwa kwe-AGM X3, kwaye beza nomxholo we-Death Note.
IMotorola iqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni ezakuhlaziya kwiPie ye-Android 9.0
Iifowuni zeMotorola ziqinisekisile ukuhlaziywa kwiPie ye-Android 9.0. Fumana ngakumbi malunga neemodeli eziza kufumana uhlaziyo.
IColppad Mega 5A, isiphelo esisezantsi esine-5.45 ″ HD + isikrini esingaphantsi kwama-euro angama-90
ICoolpad ikhuphe iMega 5A, isixhobo sayo samva nje esineenkcukacha zobuchwephesha obusezantsi.
Isivumelwano phakathi kukaGoogle noWhatsApp: iikopi ezigcinayo aziyi kubalwa njengendawo esetyenzisiweyo kuGoogle Drayivu
Enkosi kwisivumelwano esitsha phakathi kukaWhatsApp noGoogle, ikopi yogcino lweakhawunti yakho yeWhatsApp ayizukubala kwiakhawunti yakho kaGoogle Drayivu.
AbakwaNokia bangasebenza kwisithethi esihlakaniphile
AbakwaNokia bangasungula isithethi sabo esihlakaniphile kungekudala. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani ngesi sithethi sincedisayo.
UDonald Trump uyakwalela ukusetyenziswa kukarhulumente kweHuawei, ZTE kunye nezinye izixhobo zeenkampani zaseTshayina
UDonald Trum, umongameli wase-United States, usebenze nje umthetho omtsha othintela ukusetyenziswa kweHuawei, ZTE kunye nezinye iimveliso.
I-Oppo F9 ilapha. Dibana nefowuni yokuqala ngeCorning Gorilla Glass 6!
I-Oppo F9 isemthethweni. Fumanisa onke amanqaku kunye nokubalulwa kobuchwephesha kwifowuni yokuqala ngeCorning Gorilla Glass 6!
Umahluko omtsha weVivo Y81 usungulwa ngokusetyenziswa kweminwe yokufunda
IVivo Y81 isandula ukukhutshwa ngokwahlukileyo. Le ngoku iza nesifundi seminwe ngasemva. Iyafumaneka e-India!
Ukuqaliswa kwe-Oppo R17 Pro kusondele kakhulu
I-Oppo isondele ekumiliseleni i-R17 Pro, inkampani elandelayo yeflegi eya kuthi ixhotyiswe ngeQualcomm Snapdragon 845.
I-Smartisan Nut Pro 2S iya kufika nge-20 ka-Agasti: ukubhukisha kwi-JD.com kuvuliwe
USmartisan uza kubamba umsitho apho aya kuthi abonise imveliso entsha ngo-Agasti 20. Isenokuba yi-Smartisan Nut Pro 2S.
Ezi zezona smartphones zibalaseleyo zokonwabela i-YouTube, ngokweGoogle
Ukuba ufikile ukuza kuthi ga ngoku, mhlawumbi ucinga ukuba eli nqaku lithetha ntoni ngesihloko, inqaku elingenakwenza ntsingiselo ukuba bekungekho kuba ngokweGoogle, ayizizo zonke ii-smartphones ezihlangabezana neemfuno ukuze zikwazi ukonwabela nganye nganye. omnye wemisebenzi ebonelelwa yividiyo enkulu yeYouTube.
Iflegi elandelayo kaMeitu iya kuba neQualcomm Snapdragon 845
UMeitu sele eza kusazisa ngesiphelo saso esilandelayo. Le smartphone inokuxhotyiswa ngeQualcomm Snapdragon 845 SoC, ngokweGekbench.
IMotorola iyakulungiselela iMod Moto efana ne-Samsung DeX
IMotorola ikwafuna ukulinga icandelo lemveliso kunye nee-mobiles zayo kwaye inokuthi isungule iMod Moto efana ne-Samsung DeX